ကိုယျ့အသားရညျနဲ့ ကိုကျညီတဲ့ skincare ပစ်စညျးတှကေို ဘယျလို ရှေးဝယျကွမလဲ? - OnDoctor
By Kaung Htet Naing	 On Mar 11, 2019
ကိုယ့်အသားရည်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ skincare ပစ္စည်းတွေကို ဘယ်လို ရွေးဝယ်ကြမလဲ?
ခုခေတ်မှာ Skincare ပစ္စည်းမျိုးစုံက လက်တစ်ကမ်းမှာတင် ဈေးအစားစား၊ အမျိုးအမည် စုံလင်စွာနဲ့ ဝယ်ယူလို့ရနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်အသားရည်နဲ့ ကိုက်အောင် ဘယ်လိုရွေးဝယ်ရမလဲဆိုတာတော့ တော်တော်ခေါင်းရှုပ်စရာပါနော်။ ရွေးချယ်စရာတွေ များလွန်းတော့ ရွေးရလဲခက်တယ်။
များသောအားဖြင့် skincare တွေဝယ်မယ်ဆို အားလုံးက လက်မှာစမ်းလိမ်းကြပါတယ်။ အဲဒါက မှားပါတယ်။လက်အသားရည်နဲ့ မျက်နှာ အသားရည်ဟာလုံးဝ မတူပါဘူး။
အနည်းဆုံး ၂ နာရီလောက်ထားရပါမယ်။ အချိန်ပေးနိုင်ရင်တော့ တစ်ညလိမ်းအိပ်ကြည့်ပါ။ အဲ့မှာမှ ပေါင်အတွင်းသား အရည်ပြားမှာ နီတာ၊ယားတာ၊ပူတာ၊ အဖုပေါက်တာ မရှိဘူးဆိုမှ ကိုယ့်မျက်နှာပေါ်ကို ဒီ Skincare ကိုစိတ်ချလက်ချ လိမ်းလို့ရပါပြီရှင်။
how to choose skincare product that conformable your skinScarlette(ဆေး၁)